स्वास्थ्य – Page2– Tesro Ankha
नाकलाई यसरी स्वस्थ राख्न सकिन्छ
लोकनाथ खनाल तपाईंको नाक बन्द भइरहन्छ ? वा नाकभित्र मासु पलाउँछ । समय–समयमा नाथ्री फुटिरहन्छ ? त्यसो हो भने घरेलु उपचार र प्राणायामबाट नाक स्वस्थ राख्न सकिन्छ । नाकलाई यसरी स्वस्थ राख्न सकिन्छ । –नियमित शुद्ध प्राणवायु ग्रहण गर्ने । –भस्त्रिका, अनुलोम–विलोम आदि प्राणायाम नियमित गर्ने । –जलनेती, रबर नेतीको अभ्यासले नाक तथा मस्तिष्क शुद्ध राख्छ । –नाक बन्द हुने तथा नाकभित्र मासु पल...
यस शताब्दीको अन्त्यसम्ममा पृथ्वीको तापक्रम निकै बढ्ने वैज्ञानिकहरूको तर्क छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरसरकारी निकाय (आईपीसीसी) ले तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार यस शताब्दीको अन्त्यसम्ममा पृथ्वीको जलवायुमा निकै परिवर्तन आउने उल्लेख छ । नोबेल शान्ति पुरस्कारसमेत हात पारिसकेको उक्त निकायमा विश्वका दुई हजार वैज्ञानिक तथा नीति–निर्माता संलग्न छन् । यसको सम्मेलन डेनमार्कको कोपनहे...
डा. सुनीलराजा मानन्धर काठमाडौं उपत्यकालगायत देशभरि बिस्तारै चिसो बढिरहेको छ । तराईमा शीतलहरसमेत सुरु भइसकेको छ । चिसो बढेसँगै विभिन्न स्वास्थ्य समस्या पनि देखिने गर्छन् । जाडो मौसममा विशेषगरी रुघाखोकी, श्वासप्रश्वासका बिरामी उल्लेखनीय बढेको पाइन्छ । चिसोले विशेषगरी बालबालिका र वृद्धवृद्धामा धेरै असर पार्छ । तर, आज हामी बालबालिकाको विषयमा चर्चा गर्दै छौं । जाडो मौसममा बालबालिकाल...
जाडोमा घाम ताप्दा चायाँ पोतो आउने, यसरी जोगाउन सकिन्छ छाला
डा. ललन खतिवडा मौसम परिवर्तनसँगै वातावरणीय तापक्रम पनि कम हुँदै जान्छ । हामी संसारको जुनसुकै ठाउँमा बसे पनि मौसम परिवर्तनको पहिलो असर हाम्रो छालामा देखिन्छ । छालामा पनि तापक्रम परिवर्तनको असर देखिने गर्छ । जाडोयाममा चिल्लो पदार्थ उत्पादन गर्ने ग्रन्थीले कम मात्रामा चिल्लो उत्पादन गर्छ, जसले गर्दा शरीर सुख्खा हुने हुन्छ । गर्मीको तुलनामा जाडो मौसममा छाला रोग लाग्ने सम्भावना पनि बढी हुन्छ । ...
समयमा नसुत्ने बालबालिका अत्यधिक मोटो, मोटाउन नदिन यसो गर्नुहोस्
तपाईंको बच्चा अस्वाभाविक रूपमा मोटाउँदै गएकाले चिन्तित हुनुहुन्छ । त्यसो हो भने चिन्ता गर्न पर्दैन । तर, तपाईंले आफ्नो बच्चालाई समयमा खाना खान दिनुपर्छ । त्यतिमात्रै होइन, समयमा सुत्न दिने र खेल्नका लागि निश्चित समय तोकिदिने हो बालबच्चालाई अस्वाभाविक रूपमा मोटाउन पाउँदैनन् । अमेरिकाको ओहियो स्टेट विश्वविद्यालयप्रमुख लेखक सारा एन्डरसनका अनुसार विद्यालय प्रवेशको उमेरमा बालबालिकाको दिनचर्या उनीहरू...
सर्मिला थापा जनैखटिरा एकप्रकारको भाइरल इन्फेक्सन हो । भेरिसेला जोस्टर भाइरसका कारण जनैखटिरा आउँछ । जनैजस्तो आकारमा देखिने भएकाले यसलाई जनैखटिरा भनिएको हो । जनै खटिरा लागेपछि निको हुँदैन । यसले समातेपछि सम्बन्धित व्यक्तिको मृत्यु हुन्छ भन्ने भ्रम छ । वास्तवमा के हो त जनै खटिरा ? कस्ता व्यक्तिलाई यो रोग लाग्ने सम्भावना रहन्छ ? के हुन् जनैखटिरा ? यसको लक्षण र उपचार नगरे कस्तो समस्या आइपर्छ ...
मोटाएर बाहिर निस्केको पेट यसरी घटाउन सकिन्छ (१२ घरेलु उपायसहित)
हिजोआज मानिसले सुरुसुरुमा मोटाउँदा त्यति ध्यान दिँदैनन् । मोटोपन अत्यधिक बढेपछि घटाउन घन्टौं पसिना बगाउँछन् । मोटोपन घटाउन खानपिनमा ध्यान दिन जरुरी छ । केही प्राकृतिक चीज यस्ता हुन्छन्, जसको प्रयोगले तौल नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । तौल घटाउन धेरै मिहिनेत गर्न नसक्नेले सजिलो उपाय पनि छ । यसलाई आत्मसात् गरी लाभान्वित हुन सकिन्छ । (१) धेरै कार्बाेहाइड्रेट भएको खाद्यपदार्थ नखानुहोस् । चिनी, आलु र ...
सामान्यतया अरूलाई देखाउन र आफ्नो पर्सनालिटीका लागि मान्छेहरू महँगो कपडा लगाउँछन् । तर, बाहिरी कपडाहरू मात्र होइन, भित्री कपडाहरू पनि महँगा र ब्रान्डेडमै मोह बढ्दै गएको छ । ५ हजार रुपैयाँसम्मका अन्डरवेयर र १० हजार रुपैयाँसम्म ब्रा नेपाली बजारमा बिक्री हुने गरेको छ । खासगरी नेपालका सेलेब्रेटीहरू इनर वेयरमा निकै ध्यान दिन्छन् । अन्डरवेयरको नेपाली बजार र सेलेब्रेटीहरूको रोजाइबारे रिपोर्ट : १० ह...
बलराम चौलागार्इं हाम्रो शरीरको महत्वपूर्ण अंग मुटुको नियमित रूपमा खुम्चने र फुक्ने प्रक्रियालाई धड्कन भन्ने गरिन्छ । मुटुलाई मानव जीवनको चक्र चलाइरहने भित्री पम्पका रूपमा लिने गरिन्छ । यस प्रणालीद्वारा प्राणी मात्रको विभिन्न अंगमा शुद्ध रगत पुर्याउने र त्यहाँस्थित प्रदूषित रगतलाई मुटुसम्म ल्याएर पुनः शुद्धीकरण गर्ने कार्य जन्मदेखि मृत्युपर्यन्त चलिरहन्छ । खुम्चने प्रक्रियालाई सिस्टोलिक र फु...
तौल घटाउन दाल/पनिर मिसाएर खानु उत्तम
काठमाडौं । जानी नजानी मानिस स्वास्थ्यप्रति सचेत हुन्छन् । सचेत बन्दाबन्दै कतिपय अवस्थामा भ्रमको सिकार बन्नुपर्छ । स्वास्थ्यसँग जोडिएका केही भ्रमको मिथक तथा तथ्य यस्ता छन् । मिथक : गर्भवती महिलाका लागि मेवा खानु हानिकारक हुन्छ । वास्तविकता : मेवाले गर्भपतन हुन्छ भनेर गर्भवती महिलालाई मेवा नखान सल्लाह दिइन्छ । काँचो मेवामा पाइने तत्वले गर्भाशय खुम्चन सक्छ । तर, पाकेको मेवामा भिटामिन तथा मिनर...